Apple yazvino iPadOS uye macOS betas pakupedzisira inounza Universal Control
Apple yakazotanga kuburitsa Universal Control, asi iwe unofanirwa kuisa yazvino yekuvandudza betas ye iPadOS uye macOS Monterey kuzviedza.
Iyo yakamirirwa kwenguva refu, iyo Apple yakazivisa pa WWDC 2021, haisati yave kuwanikwa kune vatengi kuburikidza neiyo official software updates, asi inogoneswa nekusarudzika mu iPadOS 15.4 uye macOS Monterey 12.3 betas yevagadziri. Kana iwe ukadziisa, uchaona sarudzo nhatu dzeUniversal Control dzakanyorwa nebeta tag.
Ramba uchifunga Universal Kudzora ndiko kuwedzera kwe Apple's Continuity system. Nayo, unogona kushandisa mbeva imwe chete uye kiibhodhi kufamba zvisina mutsetse pakati peMac nePadad, hapana kuseta kunodiwa. Iwe unogona kudhonza uye kudonhedza zvirimo pakati pemidziyo, negonzo rako richifamba pazviratidziro zvavo zvese sekunge zvakasungwa.
Unogona kuverenga zvese nezve Universal Control uye kuti inoshanda sei mukati Pocket-lint's guide.
Apple pakutanga yaida kuburitsa Universal Control matsutso apfuura, asi yakapotsa iyo hwindo rekuburitsa. Izvozvi zvinotarisirwa chirimo chino, uye chokwadi chiripo mubeta chiratidzo chakanaka chekuti inogona kuburitsa munguva pfupi iri kutevera - pamwe nekuburitswa zviri pamutemo kwe iPadOS 15.4 uye macOS Monterey 12.3 kune veruzhinji.
Apple yakaburitsawo iOS 15.4 beta nemusi weChina, ichiwedzera kugona kushandisa Face ID wakapfeka mask uye zvakare emoji nyowani.
Maitiro ekuisa macOS Monterey beta
Maitiro ekubatana neApple beta chirongwa uye edza software nyowani
Chii chinonzi Apple Universal Kudzora uye inoshanda sei pamidziyo yako?